Adeegeena - Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
1. Ku saabsan weydiinta
Marka ugu horeysa, haddii aad doorato alaabta si madax-bannaan ay u qaabaysay shirkadeena, waxaan ku siin karnaa qiimaha ugu wanaagsan marka loo eego shuruudaha tijaabada alaabta iyo tirada alaabta ee suuqaaga. on)
Marka labaad, macaamiisha si ay u bixiyaan sawirro / muunado si ay u weydiiyaan, waxaan leenahay shaqaale xisaabiye gaar ah si ay si sax ah u xisaabiyaan xigashada alaabta sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha. Waxaan leenahay hab xisaabin iyo xisaab hubin aad u adag Oraahda ayaa la soo xigan doonaa isla maalintaas. Sida sawirka hoose oo kale. Haddaba, Fadlan rumayso kartidayada xirfadeed iyo habdhaqanka mas'uuliyadda
2. Ku saabsan muunada
Waxaan leenahay kooxdayada naqshadaynta xirfadlayaasha ah iyo caddaynta, oo leh laba naqshadeeyayaal oo ku hawlan in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo naqshadeedka alaabta ah, sayid furan template, afar caddayn alaabta. Waxaan ku haysan karnaa badeecada dhammaatay ugu yaraan 24 saacadood. Oo annagu waa laguu habayn karaa adiga, laakiin sidoo kale sida ku cad sawiradaada caddaynta saxda ah. Si kasta oo ay tahay nooca daabacaadda ee aad u baahan tahay, naqshadaynta qaabka, naqshadaynta qaabka.